Home News Wasiir Islaaw oo Dalbaday in laga dhigo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Iyo Gudoomiye...
Wasiir Islaaw oo Dalbaday in laga dhigo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Iyo Gudoomiye Yariisoow oo Baqdin ay soo Wajahday!!
Warar hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya in wasiirka amniga maxamed abuukar islow ducaale uu rabo inuu booska kala baxa gudoomiyaha gobolka banaadir eng yariisoow.
Wasiir islow ayaa rabo maadaama uu ku fashilmay sugida amniga dalka in uu ka faa’ideysto qilaaf haatan soo ifbaxay oo u dhaxeeya wasiirka arimaha gudaha iyo gudoomiyaha gobolka banaadir eng yariisoow.
Tan iyo markii loo magacaabay wasaarada amniga gudaha maxamed abuukar ducaale islow ayaa waxaa muuqatay habac sanaan xoog leh oo ka jirta dhanka sugida amaanka iyadoo uu dalka ay ka dhacayeen falal lidi ku ah amaanka isagoo wasiir islow ku fashilmay inuu xaqiijiyo amaanka caasimada iskaba daayee inuu sugo amaanka dalka.
Warar xog ogaal ah oo ku dhaw wasiirka amniga ayaa sheegaya in islow uu rabo inuu noqdo badalka yariisoow oo lagayaabo in uu xilkiisaku waayo wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye.
Duqa muqdisho iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu ku saabsan yahay muran ka dhashay xilka qaadis uu sameeyay gudoomiyaha gobolka banaadir oo ka careysiisay wasiir sabriye.
Xiriirka u dhaxeeya xafiisyada Gudomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo kan xukuumada ayaa waxaa ka jira habacsanaan ku aadan in kheyre iyo wasiiradiisa aysan ku qanacsaneen gedoomiye yariisoow.
Wasiir islow ayaana doonaya inuu ka faa’ideeysto qilaafka xukuumada iyo gudoomiye yariisoow ka dhex aloolsan iyadoo lagayaabo inuu noqdo gudoomiyaha badali doona eng yariisow.
Xogta aan helnay ayaa waxaa ay sidoo kale tilmaameeysaa in madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo uu diiday in Wasiir islaaw laga dhigo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir maadaama uu yahay shaqsi ku fashilmay amnigga qaranka,sidaasi oo ay tahay Dad-badan ayaa waxaa ay qabaan in loo baahan yahay shaqsi labadooda ka Madax Banaan oo Xilkaasi loo dhiibo.
Balse su’aasha isweydiinta u baahan ayaa ah islow hadii uu kusoo fashilmay wasaarada amniga wax maka qaban karaa howlaha gobolka banaadir.
Sikastaba ha ahaatee waxaa la fahansanyahay in hadii uu islow u bandhigo kheyre qorshaha uu ku doonayo inuu ku noqdo gudoomiya gobolka banaadir inuu ku qanci doono, kheyrana uu ka shaqeyn doono sidii yariisow xilka looga qaadi lahaa.
Previous articleAmaro Adag oo Lagu Soorogay Ganacsatada iyo Gadiidleeyda Isticmaasha Dekeda Muqdisho
Next articleOdayaasha Dhaqanka Beesha Mudulood oo Walaac ka Muujinaayo damaca Wasiir Islaaw Ee Gobolka Banaadir!!
Dhaqaatiir Ajnabi ah oo Muqdisho lagu qarxiyay iyo Waxyeelo kasoo gaartay!!
Wasiir Beyle oo maanta shir gudoomiyay shir looga hadlayay cafinta deymaha...